Ukucaca kuhlasela ubuqhophololo kunxibelelwano | Martech Zone
Umhlobo olungileyo wam iminyaka emininzi ngu USteve Woodruff, uzibhengezile (kwaye unetalente kakhulu) Ukucaca koMcebisi, iyaqhubeka nokwabelana nentengiso ehlekisayo-thetha kwiiwebhusayithi kunye neeprofayili zemidiya yoluntu. Wabelana naye lonke ixesha elithandayo kunye nam kwiminyaka embalwa edlulileyo:
Sibe nguvulindlela wemodeli entsha yozinzo, oluqhutywa ngumthengi ukukhula ngokusekwe kwimigaqo yeenkqubo ezintsonkothileyo zokuziqhelanisa. Esi sisiseko esitsha sesicwangciso sehlabathi eliza notshintsho olunzulu kulwakhiwo: iingcinga ezahlukeneyo malunga nokudala ixabiso, indlela eyahlukeneyo yentengiso kunye nophuhliso lweshishini, isakhelo esahlukileyo sokubona nokucinga. Inkqubo yendalo esingqongileyo sisiseko esitsha sokhuphiswano. Iinkampani ezaziyo ukubeka nokulawula ngokwazo njengamaqonga okuzenzela zinokwenza ukukhula okufana noGoogle phantse kube kuqhutywa yitemplate.
Ithetha ntoni loo nto? Maninzi amagama kwaye andinalo nofifi.
Kudala ndifuna ukubhala le posi okwethutyana, kwaye izolo omnye umhlobo wam olungileyo, UMark Schaefer, yaba ngunobangela. Phawula kwabelwana uphawu lwentengiso yePalmolive byline, Uhlasela iGrisi kuNxibelelwano.
Kungoko igama lale post ... Ndiyathemba ukuba uMarko akanangxaki nokuba ndilibile uluvo kwiposti yakhe ka-Facebook. Owu, kwaye kufanele ukuba kuqatshelwe ngokufanelekileyo ukuba indawo kaMarko yile amashishini.com… Ingaba iyacaca ngakumbi kunaleyo?
Ulwabelwano lukaSteve kwezentlalo luye lwaguqa kum ngaphezulu konyaka. Iwebhusayithi yethu yearhente yayiyingqokelela yamabinzana amagama aqhelekileyo anokuqaqambisa eyona nto imangalisayo. Ngalo lonke ixesha uSteve esabelana ngebinzana elingenamsebenzi kwiwebhusayithi, ndizifumanisa ndivula isikhangeli ukuze ndiqiniseke ukuba akayifumani DK New Media!
Ngenxa yoko, ndakhuthazeka lungisa iphepha lasekhaya. Ndaya entlokweni yam kutheni iinkampani ziqhubeka nokusebenzisa iarhente yethu, kwaye konke kweza kwinto enye… silungisa oko kwaphukileyo kwintengiso yabo kwi-Intanethi. Kodwa ayisoloko iyinto enye ... ngamanye amaxesha kukubeka uphawu, ngamanye amaxesha ikopi yabo, ngamanye amaxesha ukukhangela kwabo. Ngenxa yoko, ndibhale umbhalo omncinci omncinci obeka endaweni igama elinye kwisivakalisi.
I-verbiage entsha, ecaciswe gca, yile:
Intengiso yakho yedijithali ayiqhubi __________. Siyayilungisa loo nto.
Amagama esiwatofa ngawo Iziphumo, igama, iZikhundla, iiNdwendwe, iGunya, iiNkokeli, abalandeli, iRhafu, uKhuphelo, ukuzibandakanya, ukuSayina, iiRoy, iiThemba, ukuGuqula, ukuFunda, ukuSebenzisa, abaJongi, iiNtsimbi, abaFundisi, ukuSebenza, ukuThengisa, ukuGcina, ukuBhaliswa, iNzuzo, Ukwazisa, kwaye imfuneko.
Ewe, ndinokuqhakaza malunga nenkqubo yethu eqinisekisiweyo, yokulinda ilungelo lomenzi ngokwandisa ukukhula kwentengiso yabathengi bethu (ibali eliyinyani)… kodwa yintoni eyona nto kuthetha? Ewe, oko kuthetha ukuba silungisa into engalunganga. Kukho konke ukubandakanyeka esinako, yeyona nto sigxile kuyo kwaye sifuna ukuba abathengi bethu bajolise kuyo. Sifuna ukuqinisekisa ukuba sichonga izithuba kwizicwangciso zabo zokuthengisa, kwaye sibancede ukuba bagcwalise ezo zikhewu ukuqhubela phambili ishishini labo.
Andazi ukuba umthambo ukuya ekuthetheni ngokucacileyo, ingxelo ecacileyo imalunga nokususa okanye ukunciphisa amagama. Oko kunokuba ngumsebenzi onokukunceda ukuba uvelise ukucaca kwintengiso yakho kunye nezinto zokuthengisa. Ndiyakholelwa ukuba inkqubo endihambe kuyo yayijolise koku sikuphumezileyo kubaxumi bethu kunokuba sigxile ekubeni singoobani kwaye sinakho ukwenza ntoni. Kwiminyaka eyadlulayo, bendibhala malunga neenkampani zetekhnoloji rhoqo Iimpawu zentengiso ngaphezulu kwezibonelelo.
Xa ujolise kwinto onokukwazi ukuyenza kunokuba uyifezekise kubaxumi bakho, ndicinga ukuba kulapho ukugunyaziswa kwamagama kungahambi kakuhle!
tags: IgunyaUlwaziIcacileguqukacopywritingimfunekozokulandaNxaxhebafansabalandelikukhokelelaUMark Schaeferukwenzainzuzoamathembai rankingsUkufundaubhalisoidumelaiziphumoukugcinwaIngenisoROIUkunika amandla ukuthengisaBhalisauSteve WoodruffUkuthengisaukusetyenziswaAbabukeliiindwendwe
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2016 ngo-11: 52 AM
Ndiyayithanda into oyenzileyo ngephepha lasekhaya - ngakumbi "i-carousel" yokutshintsha kwamagama, eyayingumbono endingazange ndiwuqwalasele ngaphambili. Qhubeka!
UJeffry Pilcher | Uhlobo lwezeMali
Ngomhla wama-26 ku-Disemba 2016 ngo-11: 07 AM
Abathengisi kudidi lwempahla yabathengi / indlu bayayiqonda into yokuba into oyithengisayo kufuneka isombulule iingxaki zabantu. Intengiso yakho kufuneka ichaze ingxaki kwaye inike isisombululo ngokufanelekileyo- zihlala zingaphantsi kwamagama ama-5-10. Ngesizathu esithile, abathengisi be-B2B abayiqondi le nto. Kwaye kwiimeko ezininzi, eyona miyalezo yentengiso iqinisekisiweyo ivela kwezo zisombululo zentengiso.
Abaphathi be-CEO kunye nababhali beekopi kumashishini okuthengisa bathanda isigama esikhulu kuba senza umsebenzi wabo uvakale kakhulu (kwaye bacinga ukuba banokuhlawulisa ngaphezulu). Ukunyaniseka, uninzi lokusilela kokucaca kwenjongo kwaye abanalo ithemba lokuzithembisa ngokungagungqiyo- umzekelo, “Siza kukunceda ukusombulula ingxaki X.”
Ukuba awukwazi ukundixelela-ngesivakalisi esinye nakwisiNgesi esicacileyo-uza kundenzela ntoni, ishishini lam okanye usapho lwam, ke unemisebenzi emininzi ekufuneka uyenzile.